Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAfar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho
August 3, 2018 Abdi Omar Bile Somalia 0
Muqdisho-(Pountland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.
Duqeynta ayaa Khamiistii ka dhacday meel qiyaastii 74 mayl dhanka waqooyi-galbeed ka xigta Muqdisho, sida Taliska Mareykanka ee Africa (AFRICOM) ay bayaan ku sheegeen maanta oo Jimce ah.
Wax dad ah oo shacab ah kuma dhiman weerarka, bayaanka lagu sii sheegay.
“Ciidamada Mareykanka waa ay sii wadi doonaan in ay adeegsadaan dhammaan tallaabooyinka la ansixiyay iyo kuwa ku haboon ee lagu ilaalinayo muwaadiniinta Mareykanka si looga hortago dhammaan khataraha argagixisada,” AFRICOM ayaa sidaas sheegtay.
Mareykanka ayaa kordhiyay weeraradiisa ka dhanka ah Al-Shabaab tan iyo markii Madaxweyne Donald Trump uu awood badan siiyay AFRICOM si ay u qaadaan duqeymo lagu bartilmaameedsanayo kooxda hubeysan ee ku sugan Soomaaliya.
September 3, 2019 Mareykanka oo sheegay in duqeyn ay ka fuliyeen Jubbada Hoose ku dileen hal dagaalyahan oo Al-Shabaab ah